विश्वकप अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा जर्मनी र स्वीट्जरल्याण्ड विजयी - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
Posted by Headline News Desk | २६ जेष्ठ २०७५, शनिबार ०९:२२ |
२६ जेष्ठ, काठमाण्डौं । विश्वकप अघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा गएराति जर्मनी र स्वीट्जरल्याण्डले आ–आफ्नो खेलमा जित हासिल गरेका छन् ।
लिभरकसेलको बे एरिनामा भएको खेलमा जर्मनीले साउदी अरबलाई २–१ गोलले हरायो । खेलको आठौं मिनेटमै मार्को रिउसको पासमा युवा स्ट्राइकर टिमो वेर्नरले गोल गरेपछि जर्मनीले अग्रता लिएको थियो ।
४३ औं मिनेटमा साउदीका ओमार हासावीले आत्मघाती गोल गरेपछि जर्मनीले पहिलो हाफमा २–० को अग्रता लियो । खेलको नियमित समय सकिनु ६ मिनेटअघि ताइसिर अल जासीमले सान्त्वना गोल फर्काए । साउदी अरब विश्वकपको समूह ‘ए’ मा छ र उसले उद्घाटन खेल जुन १४ मा रुससँग खेल्नेछ ।
यस समूहमा उरुग्वे र इजिप्ट पनि छन् । जर्मनी प्रतियोगिताको समूह ‘एफ’ मा छ । जर्मनीको समूहमा मेक्सिको, स्वीडेन र दक्षिण कोरिया छन् ।
शुक्रबार राति भएको अर्को मैत्रीपूर्ण खेलमा स्वीट्जरल्याण्डले एशियाली टोली जापानलाई २–० ले हरायो ।
स्वीट्जरल्याण्डको जितमा रिकार्डो रोड्रिगुइजले पेनाल्टीमार्फत अग्रता दिएका थिए भने ह्यारिस सेफरोभिकले २–० को विजयी गोल गरे । स्वीट्जरल्याण्ड विश्वकपमा समूह ‘इ’ मा छ । उसको समूहमा ब्राजिल, कोष्टारिका र सर्बिया छन् ।
गएराति नै भएका अन्य मैत्रीपूर्ण खेलहरुमा इरानले लिथुवानियालाई १–० ले हराएको छ भने क्रोएशियाले सेनेगललाई २–१ ले पराजित गरेको छ । त्यस्तै पोल्याण्ड र चिलीले २–२ गोलको बराबरी खेलेका छन् ।
Previousदुई दिन चाँडैं भित्रियो मनसुन !
आर्सनलले चेल्सीलाई पाँच बर्षपछि हरायो !
९ आश्विन २०७३, आईतवार ०९:४०
१७ वर्षे बेन बुडवर्नको गोलले वेल्स विजयी
१८ भाद्र २०७४, आईतवार ०८:२५
९ असार २०७५, शनिबार १३:४९
बरुण नदीमा बाढी : नदी थुनिएपछि झण्डै २ किलोमिटरको ताल, गृहमन्त्रालयको टोली जाँदै
८ बैशाख २०७४, शुक्रबार १०:३७